भारतले खोल्न नमानेको बाँध बाढीले भत्कायो, भारतीय बस्तीमै मच्चियो बिचल्ली र भागाभाग — Sanchar Kendra
१लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार
२कक्षा ११ को विद्यार्थी मूल्यांकन विद्यालयले आफ्नो अनुकूलतामा गर्न सक्ने
३काठमाडौँ उपत्यकामा निजी गाडी चलाउन दिने तयारी, सिडिओको बैठक बस्दै
४कोरोनाले थला परेको भारतबाट आयो अहिलेसम्मकै खुसीको खबर
५महाकाली नदीमा बाढी- निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो
६बेहुली लिन गएका बेहुलालाई कोरोना देखिएपछि…
७फेरि घट्यो सुनको मूल्य
८प्रेमिकासँग ​पुनर्मिलनपछि दंग ज्याकले किन गर्न सकेनन् गोल ?
९आँपका लागि राखियो तीन सुरक्षाकर्मी, ९ वटा कुकुरले दिन्छन् चौबिसै घण्टा पहरेदारी
१०बुढानिलकण्ठमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै देउवा
११नबिल बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न
१२बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, कसलाई के भने त्यस्तो ?
भारतले खोल्न नमानेको बाँध बाढीले भत्कायो, भारतीय बस्तीमै मच्चियो बिचल्ली र भागाभाग
काठमाडौँ । रौतहटको सिमानामा भारतले बाँधेको बाँध बाढीले भत्किएको छ । बाँध फुटेर पानी भारततर्फ बगेपछि रौतहटमा पानीको सतह घट्न थालेको छ । बाँध फुटेपछि बाढी भारतीय बस्तीमा पसेको छ । बाढी पसेपछि भारतीय बस्तीहरु बैरगनिया, अशोगी, भकुरहर, सिन्धुलिया लगायत ठाउँका बासिन्दामा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । भारतको बैरगनिया र रौतहटको गौरको बीचमा रहेको भारतीय बाँधका कारण सदरमुकाम गौरसहित रौतहटका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन् । बाँधमा भएका ढोकाहरु नखोलिदिँदा संकट निम्तिएको भन्दै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले भारतीय अधिकारीलाई पानीको निकास खोल्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर पानीको बहाव खोलिदिनुको सट्टा बाँधमा सुरक्षाकर्मी खटाएको भन्दै रौतहटबासीले सामाजिक सन्जालमार्फत भारतको आलोचना गरेका थिए । फेसबुक प्रयोगकर्ताले भारत विरोधी स्टाटससँगै ‘गो ब्याक इन्डिया’ ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरेका छन् ।
पानी थुनेर छिमेकी मार्न खोजेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा भारतको बिरोध भैरहेको थियो । भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधले नेपालको भू–भाग डुब्दै आएको छ । भारतको बाँधका कारण गौरमा दश फुटभन्दा बढी पानी जमेको थियो । गौरमा डुबान हुँदा पनि भारतीय पक्षले बाँधको ढोकाहरू खोल्न मानेको थिएन । भारतीय पक्षले अटेर गरेपछि भारतविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरू भएको हो । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भारतीय पक्षसँग बाँध खोल्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको जानकारी दिएका थिए । लक्ष्मीपुर बेलबिछ्वा भन्ने ठाउँको बाँध पानीले पार गरेपछि आफै फुटेको हो । त्यो बाँध फुटेसँगै भारतीय बजारहरू बैरगनिया, अशोगी, भकुरहर, सिन्धुलिया लगायतका दर्जनौं बस्ती बिचल्लीमा परेका छन् । भारतले बाँध क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) परिचालन गरेको छ ।
त्यस्तै लगातारको वर्षाले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोमा परी अहिलेसम्म २५ जनाको ज्यान गएको छ । बाढी र पहिरोमा परी १२ जना बेपत्ता भएको गृहमन्त्रालय जनाएको छ । ललितपुरमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने काठमाडौं र खोटाङमा ३–३ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर र भोजपुरमा २–२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, झापा, इलाम, ओखलढुंगा, बारा, पर्खा, रामेछाप र धादिङमा १–१ जनाको मृत्यु भएको गृहले जानकारी दिएको छ । बाढीपहिरोमा परी सिन्धुलीमा ३ जना बेपत्ता भएका छन् भने मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, महोत्तरी, रौतहट, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर र धादिङमा १–१ जना बेपत्ता भएका छन् । आज बिहान १० बजेसम्म मुलुकभर २१ जना घाइते भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण ४३५ घर परिवार विस्थापित भएका छन् । यस्तै १६५ जनालाई उद्धार गरिएको गृहले जनाएको छ ।
उता अविरल वर्षाका कारण जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जलाशयमा परिणत भएको छ । वर्षाले नगरका सडकमा तीन फिटसम्म पानी बगिरहेको छ भने उपनगरपालिकाका पच्चीसै वडाका बासिन्दाको घरघरमा पानी पसेको छ । घरघरमा पानी पसेका कारण जनजीवन कष्टकर भएको छ । सडक जलमग्न भएपछि आवागमनमा समस्या भइरहेको छ । पानीको निकास नभएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालय, विमानस्थल, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वन कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राष्ट्रिय समाचार समिति, हुलाक कार्यालय, वन निर्देशनालय, जिल्ला विकास समन्वय समितिलगायतका कार्यालय डुबानमा परेको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति कार्यालय डुबानमा परी कार्यालयका कोठामा चार फिटसम्म पानी जमेको र कागजात क्षति पुर्‍याउनुका साथै समाचार सप्रेषणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । वर्षाका कारण नेपाल टेलिकमको टेलिफोन र मोबाइल अवरुद्ध हुनुका साथै विद्युत् सेवा पनि बन्द भएको छ । यसैबीच अबिरल वर्षाका कारण सप्तरी जिल्लाका अधिकांस ठाउँ डुबानमा परेका छन् । बिभिन्न नदी र खोलामा आएको बाढीका कारण जिल्लाको १८ वटै स्थानीय तह प्रभावित भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजविराजले जिल्लाभरिका एक हजार घर डुबानमा परी जोखिममा रहेको जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक रिता पौडेलले हालसम्म जिल्लामा कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिइन् ।
खड्ग खोलाको बाढीले बिसनपुर-स्वर्णपट्टी सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ । खड्ग नगरपालिका ८ स्थित बिसनपुर सडकखण्ड बाढीले बगाउँदा यातायात अवरुद्ध छ । यो सडक केही दिनअघि मात्रै निर्माण गरिएको थियो । बिहुल नदीमा आएको बाढीले बोदे बर्साइन नगरपालिकाको महनौरी गाउँका २० वटा घर बगाएको छ । घर बगाएपछि सर्वसाधारण अर्काको घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । हनुमाननगर-कंकालनी नगरपालिका वडा नम्बर १३ गोबरगाढाका हरेक घरमा पानी पसेको छ । यहाँका करिब ५ सय परिवारको घरमा पानी पस्दा सर्वसाधारण कष्टपूर्ण जीवन धान्न बाध्य भएका छन् । यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १४ रम्पुरा मल्हनियाँको हरेक घरमा पानी पस्दा सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् ।
पानीको निकास नहुँदा सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाका घरमा समेत पानी पसेको छ । वडा नम्बर २ का अधिकांस व्यक्तिको घर जलमग्न छन् । मुख्य सडकहरु पानीले भरिएका छन् । खड्ग र पाँचु खोलामा आएको बाढीले डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका अधिकांस ठाउँ डुबानमा परेका छन् । यो नगरपालिकाको प्रमुख बजार पातो पूर्ण रुपले जलमग्न छ भने औरही, तरही, भुतहीसहितका गाउँका घर पनि डुबानमा परेका छन् ।
अबिरल वर्षाको कारण त्रियुगा खोलामा आएको बाढी वस्तीमा पसेको छ । उक्त बाढी सप्तकोसी नगरपालिका ३ स्थित दलित वस्तीमा पस्दा ३५ परिवार जोखिममा परेका छन् । सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित चौधरी बस्तीमा समेत बाढी पस्दा २५ परिवार जोखिममा छन् । यो नगरपालिकाको केन्द्र फत्तेपुर पनि डुबानमा परेको छ । फत्तेपुरस्थित त्रियुगा खोलाको हेडबाँध पारुहाङ चोक क्षेत्रका करिब सय घरमा बाढी पसेको छ । बलान र बिहुल नदीमा आएको बाढीले बोदे बर्साइन नगरपालिका र बलान-बिहुल गाउँपालिकामा पानी पसेको छ ।